Zo hahazo vaovao: Manoloana ny lalàna vaovao momba izany, hanara-dia an’i Nizeria ve i Ghana? · Global Voices teny Malagasy
Tokony hitondra fangaraharana bebe kokoa ny lalàna -- raha ampiharina araka ny tokony ho izy.
Voadika ny 09 Jolay 2019 12:50 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Italiano, русский, English
Ny 21 May, nampivoitra ny Lalàna mifehy ny Zo hahazo vaovao izay nolanian'ny parlemanta tamin'ny 26 Martsa ny filoha Nana Akufo-Addo ao Ghana.
Manome zo ho an'ny olom-pirenena mba hitady, hahazo sy handray vaovao avy amin'ny sampan-draharaham-panjakana izany lalàna izany. Natao hanomezana fahafahana ho an'ny olom-pirenena mba hahazo vaovao mora foana momba ny tolotra sy ny fandaharan'asam-panjakana, ary koa mampiroborobo ny mangarahara eo amin'ny governemanta sy ny ady amin'ny kolikoly izany.
Manamafy ny UNESCO fa “ampahany feno amin'ny zon'ny fahalalahana maneho hevitra ny fahalalahana hahazo vaovao.” Ao amin'ny faritra, voasoratra ao amin'ny Sata Afrikanina momba ny Zon'olombelona sy ny Vahoaka sy ny Fanambarana ny fitsipika momba ny Fahalalahana maneho hevitra ao Afrika ny zo ho an'ny fahalalahana maneho hevitra.
Nanoratra ireo manampahefanan'ny fandaharan'asa ao amin'ny Fondation Open Society fa noho ny tahotra fiarovam-pirenena no fanamby lehibe indrindra amin'ny fanatanterahana ny lalàna momba ny fahalalahana hahazo vaovao ao amin'ny kaontinanta, fa io no nampiasain'ny governemanta ho toy ny fialan-tsiny mba hanakonana ny mangarahara:
Nalefa tany amin'ny parlemanta tamin'ny taona 2010 ihany ny volavolan-dalàna nony farany, saingy nanjaka ny fahavononana hampandany ny volavolan-dalàna tamin'ny taona 2017. Izany dia noho ny fananganana ny Media Coalition momba ny RTI izay, (miaraka amin'ny “fanohanana avy amin'ireo fikambanana fiarahamonina sivily hafa tao anatin'ny 11 volana lasa), nanao faneriterena ny Parlemanta mba handany ny volavolan-dalàna, “araka ny fampahalalam-baovao Ghaneana MyJoyOnline.
Nandalo dingana miadana tamin'ny fandaniana ny lalàna tahaka izany koa i Nizeria, mpifanolo-bodirindrina akaiky an'i Ghana talohan'ny nanasoniavana ny Freedom of Information (FOI), lalàna tamin'ny Mey 2011, nataon'i Goodluck Jonathan, filoha tamin'izany. Raha mikasika an'i Nizeria, nialohavan'ny fikatrohana am-polo taona ny Lalàna FOI izay nahitana fivezivezena intelo teo amin'ny parlemantan'i Nizeria, ny Antenimieram-pirenena.
Nanoratra i Ayobami Ojebode, mpampianatra momba ny serasera fa ny fisian'ny “tolona naharitra ela tao Nizeria (sy tany an-kafa) teo amin'ny gazety, ny olom-pirenena sy ny fiarahamonim-pirenena etsy ankilany ary ny governemanta etsy andaniny no antony ambadiky ny “fisalasalana” handany ny volavolan-dalàna.
Manome zo ho an'ny tsirairay mba hangataka vaovao “mangina na momba ny fananan'ny manampahefam-panjakana, sampan-draharaham-panjakana na andrim-panjakana” ny lalàna ao Nizeria. Amin'ny ankapobeny, azo atao am-bava any amin'ny fanjakana na manampahefam-panjakana nahazo alalana “izay tokony hampihena ny fangatahana an-tsoratra ary manome ny kopian'ny taratasy fangatahana any amin'ny mpangataka” ny fanaovana fangatahana hahazo vaovao ao Nizeria. Azo atao an-tsoratra na amin'ny alalan'ny olon-kafa ho an'ireo mpangataka tsy mahay taratasy ihany koa ny fangatahana.
Saingy amin'ny ankapobeny, tsy mora ny mampiasa izany fahafahana izany. Tao anatin'ny fanadihadiana tamin'ny taona 2014, nahita i Ifeoma Dunu sy Gregory Obinna Ugbo fa tsy dia mampiasa ny lalàna ny ankamaroan'ireo mpanao gazety Nizeriana satria sarotra ny mahazo tombontsoa amin'izany. Na dia fantatry ny maro aza ny fisian'ny FOI, maro amin'ireo mpanao gazety izay nandray anjara tamin'ny fanadihadiana no “tsy mbola nampiasa mihitsy ny lalàna ao anatin'ny fampiharana ny andraikitr'izy ireo amin'ny asa fanaovan-gazety.” Mihoatra ny 80% tamin'ireo namaly no nilaza fa maro tamin'ireo manampahefana ao amin'ny governemanta no tsy manaraka ny fotokevitry ny lalàna, ary nanana olana maro ry zareo tamin'ny fampiasana ny lalàna.
Yomi Akintomide, manam-pahaizana momba ny fampandrosoana, namaritra ny fetran'ny fangatahana fahazoam-baovao FOI ao Nizeria tamin'ny Global Voices: Mbola mifandona amin'ny Lalànan'ny Tsiambaratelo ofisialy, izay mbola mijanona mihatra ho an'ny mpiasam-panjakana Nizeriana ny lalànan'ny FOI. Noho izany, satria mihevitra ny ankamaroan'ny mpiasam-panjakana nizeriana “fa tsiambaratelo ny zava-drehetra”, dia “tsy noraharahiana na novaliana fahatany” ny ankamaroan'ny fangatahana FOI.